[65% OFF] Kuuboonada Stojo & Koodhadhka Xayeysiinta
Stojo Xeerarka kuubanka
15% Ka Bax Goobta Dukaanleydu waxay keydiyaan celcelis ahaan 15.0% iibsashada tigidhada ee stojo.co, iyadoo sicir -dhimista ugu weyn ee maanta ay tahay 30% iibkaaga. Summaddeena xayeysiinta ee Stojo ee ugu dambeysay waxaa lagu daray Agoosto 3, 2021. Celcelis ahaan, waxaan helnaa koodh ku -xirmo Stojo cusub 50 -kii maalmoodba mar.
20% ka dhimman Xulashada Koobabka Dayrta ee xadidan Kuuboonada Daabacan ee Stojo. Dabcan, rasiidhada daabacan ee la tixgeliyey waa inaad daabacdaa ka dibna ku isticmaal dukaanka jirka. Kuubannada dukaanka iyo Kuuboonada Stojo ee dhijitaalka ah ayaa ka go'an inay badbaadiyaan weyn. Kuubannada daabacan ee Stojo waxay ka soo baxaan bogga Kuuboonada Stojo si aad u dukaameysato xiga. Hagaag, waxaad ka ogaan kartaa 100% dalabyo firfircoon oo ku jira liisaska Xeerarka Ku -meelgaarka Stojo.
15% Ka Bax Goobta Summadaha xayeysiinta ee Stojo, rasiidhyada & heshiisyada, Ogosto 2021. Keydso BIG w/ (28) Stojo waxay xaqiijisay koodhadhka kuuboon & koodhadhka kuubanka oo dhan. Dukaanleydu waxay keydiyaan celcelis ahaan $ 12.61 w/ xeerarka sicir -dhimista Stojo, 25% foojarrada, heshiisyada dhoofinta bilaashka ah. Milkiilaha Stojo & dhimisyada sare, dhimista ardayga, furayaasha iibiyaha & Stojo.co Reddit.